Chelmo - O သွေးမိန်းကလေးတွေရဲ့ အားသာချက်လေးများ
O သွေးမိန်းကလေးတွေရဲ့ အားသာချက်လေးများ
O သွေးမိန်းကလေးတွေက ဘယ်လိုမိန်းကလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို သိကြရဲ့လား။
၀၁. ပြုံးပျော်နေတဲ့ ဘဝပိုင်ရှင်လေးပါ
သူကတော့ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ကြီးနေရတာကို တကယ်ကို ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်လည်း မမှားပါ။
၀၂. ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ အေးဆေးပါပဲ
ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ကင်းမယ်ဆိုရင် လောကကြီးမှာ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို မေ့ထားနိုင်သလို၊ စိတ်ကိုမဝင်စားပါ။ ဒါကြောင့်အသေးအမွှားကိစ္စတွေကို မေ့ထားနိုင်သူပါ။
၀၃. ဘာကိုမှဖုံးကွယ်ထားချက်တွေ မရှိပါ
ကိုယ်တွေးထားတာတွေ၊ ထင်ထားတာတွေကို အရှိကို အရှိအတိုင်းပြောပြနိုင်သူပါ။ ဖုံးကွယ်ထားတာကို မုန်းသူပါ။ ဒါဟာလည်း O သွေးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်လေးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရရှိထားပြီး၊ ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူပါ။
ဘာလို အခက်အခဲတွေနဲ့ပဲ ကြုံနေရပါစေ။ အကောင်းဘက်ကနေတွေးပြီး လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်သွားမယ့်သူပါ။ ဒါဟာ O သွေးမိန်းကလေးတွေရဲ့ ထူးခြားချက်တခုပါ။ အလုပ်အသစ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘာကိုမှ တွေးမကြောက် ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကို ရဲရဲကြီး ရင်ဆိုင်တတ်သူပါ။
၀၅. ဒါပင်မယ့်လည်း အချို့နေရာတွေမှာ ကိုယ့်အကြိုက်လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါ
သူရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ဥပမာ ဘယ်လောက်ပဲ အခန်းက ညစ်ပတ်နေပါစေ။ အဝတ်လှမ်းပုံကတော့ သူ့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအတိုင်း တိတိကျကျ လှမ်းရမှ စိတ်ထဲမှာ ကြေနပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စည်းကမ်းတွေကို သေသေချာချာကို သတ်မှတ်ထားသူပါ။
သူ့ကိုလေးစားသူ၊ လူချစ်လူခင်ပေါများတာကြောင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လုပ်ရတာများပါတယ်။ ကူညီချင်တဲ့စိတ်လေးကြောင့် သူ့နားမှာအမြဲဆိုသလို တိုင်ပင်ချင်တဲ့သူတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။
၀၇. မိသားစုအတွက် အမြဲဦးစားပေး စဉ်းစားသူပါ
မိသားစုအတွက်ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး စဉ်းစားတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတွက်ထက် မိသားစုအတွက်ကို အမြဲစဉ်းစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။
၀၈. တွေးခေါ်ပုံက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ နားလည်လွယ်တယ်
ဖြေရှင်းရမယ့် ပြသာနာတခုကို ခက်ခဲနေပင်မယ့်လည်း လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို ပထမစဉ်းစားသူပါ။ ဒါကြောင့် အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့အတူတူ ပြသာနာတခုကို ဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ တွေးတတ်တာကြောင့် ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေတောင် ဘာမှမဟုတ်တော့သလို ခံစားရမှာပါ။
၀၉. သန့်ရှင်းရေးကတော့ ခဏမေ့ထားပါတယ်
သူ့အခန်းကို ကြည့်လိုက်ရင် တောထဲကိုရောက်သလို ခံစားရမှာပါ။ သူ့အခန်းကို ရှင်းပေးချင်ပင်မယ့်လည်း သူ့ပစ္စည်းတွေကို ထိတာကို မကြိုက်ပါ။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိသလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ထားတာ တွေရှိနေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူ့ပစ္စည်းတွေကို သွားမထိတာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ အကြံပေးပါရစေ။
၁၀. အပေါင်းအသင်းကိုလည်း သေသေချာချာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသူပါ
သူကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ဘူးဆိုတာကို ချက်ချင်းဆိုသလို မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါ်လာတာကြောင့် ရုတ်တရက်တော့ လန့်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပင်မယ့်လည်း နားလည်ရလွယ်တာကြောင့် လူချစ်လူခင်များတဲ့အချက်တခုပါ။
၁၁. အစ်မတစ်ယောက်လို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အားထားမှုကို ခံရသူပါ
အသက်ငယ်တာ ကြီးတာတွေနဲ့မဆိုင်ပါ။ အစ်မတစ်ယောက်လို မြင်ရတာကြောင့် သူ့ကို အားကိုးချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာမှာပါ။ ကိုယ်ခံစားနေရတာတွေကို သူ့ကိုပြောပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မိမှာပါ။
၁၂. သူရှိနေရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ပျော်စရာကောင်းနေတယ်
သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးစနေမိပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်လေးကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးရဲ့ စကားဝိုင်းက ရယ်သံတွေနဲ့ပြည့်နေမှာပါ။ သူက စကားဝိုင်းထဲကို မဝင်နိုင်သူအတွက်လည်း သူပြောနိုင်အောင် လမ်းကြောင်းပေးမှာပါ။
ကဲ O သွေး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို သိသွားပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုသူနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်လုပ်သင့်သလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာ ကြိုးစားလိုက်ပါတော့နော်။